«Can 2019» – Trophée OFC: voahosotra ho mpanazatra mendrika i Dupuis | NewsMada
«Can 2019» – Trophée OFC: voahosotra ho mpanazatra mendrika i Dupuis
Tsy mitsahatra ny misongadina ny baolina kitra malagasy. Taorian’ny dingana tsara vitan’ny Barea de Madagascar, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, taranja baolina kitra. Voahosotra ho mpanazatra mendrika, tamin’iny fifaninanana iny, i Nicolas Dupuis, mpanazatra malagasy.
Ny dingan-dava sy ny vokatra tsara azony, ka nahatafitany ny Barea de Madagascar, teo amin’ny lalao ampahefa-dalana, no tena naharesy lahatra ny rehetra, ka nifidy azy ho mpanazatra mendrika. Aorian’i Nicolas Dupuis, eo amin’ny laharana faharoa, i Belmadi, mpanazatran’i Alzeria sy i Alliou Cissé, an’i Senegal eo amin’ny laharana fahatelo. Tsiahivina fa izy mirahalahy ireo, izay hiatrika ny famaranana, amin’ity “Can 2019” ity, anio zoma, ao amin’ny kianja Cairo Stadium.
Marihina fa noho ny zava-bitan’i Dupuis, betsaka ireo firenena sy klioba nangataka azy ho mpanazatra, saingy tsy nety izy. Nohalavain’ny fitondrana kosa ny fiaraha-miasa aminy, ka mbola voatazona, hitondra ny Barea de Madagascar, indray, i Nicolas Dupuis.